Wararka – Page 10 – Dawladnimo News
Home » Wararka (page 10)
Madaxweyne Farmaajo oo Xasan Cali Khayre u magacaabey RW
February 23, 2017	Comments 1,211 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta (Khamiis) magacaabey Raysalwasaaraha xukuumadda oo ahayd shaqada ugu horeysa ee Madaxweynaha laga sugaayey. Doorashadii Madaxweyne Farmaajo kadib ayaa si weyn loo arkaayey beelaha waaweyn ee u badan gobolka Banaadir oo shirar aan kala joogsi lahayn la yeelanaayey Madaxweynaha in uu siiyo raysalwasaaraha taas oo ahayd mid aan horey u ...
Shirweynaha Taageerada iyo Talo-siinta Madaxweynaha JFS Farmaajo
February 16, 2017	Comments 879 Views
War-murtiyeedka Shirka Soo Dhaweynta iyo Talo-siinta Madaxweynaha JFS
Qorshe Gen. Gabre looga mamnuucayo Soomaaliya oo socda
February 13, 2017	Comments 967 Views
Dad Soomaaliyeed ayaa bilaabay codsi saxiixan “petition” ku socda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo looga codsanayo inuu ka mamnuuco wadanka Gen. Gabre oo ah sarkaal Itoobiyaan ah oo haatan la shaqeeya urur Goboleedka IGAD horayna u ahaa sarkaalkii hogaaminiyey ciidankii Itoobiya ee soo galay wadanka 2006. Hoos ka eeg heerka uu marayo codsiga waxaana ku biirin kartaa saxiixaaga hadii aad ...
Madaxweyne Farmaajo oo shacabka ka dalbaday inay joojiyaan Banaanbaxyada (VIDEO)
February 10, 2017	Comments 758 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi “Farmaajo” ayaa xalay shacabka Soomaaliyeed kala hadlay Telefishinka Qaranka SNTV isagoo shacabka uga mahadceliyay taageerada ay muujiyeen. Madaxweynaha ayaa ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed iney isdejiyaan lana joojiyo dabaaldegyada, wuxuuna ka codsaday bulshada in la joojiyo dibadbaxyada. Wuxuu ku boorriyay ummadda Soomaaliyeed iney isu gargaaraan una gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee ku tabaaloobay abaarta dalka ...
Farmaajo oo loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya
February 8, 2017	Comments 1,177 Views
Waxaa goor dhow lasoo gunaanaday doorashadii madaxweynaha ee ka socotay magaalada Muqdisho taas oo uu ku guuleystay musharrax Maamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha cusub ayaa isla goobta lagu dhaariyay kaddib markii uu tartanka ka tanaasulay Xasan Sheekh Maaxamuud oo ay tartanka isugu soo hareen. Magaalada ayaa waxaa hareeyay farxad iyo dabaaldeg iyadoona guud ahaan magaalada laga maqlayo rasaas farxadeed oo xooggan.
Xasan Shiikh iyo Cumar Cabdirashid oo soo dhaweeyey go’aankii maxkamadda ICJ
February 3, 2017	Comments 897 Views
Madaxweynaha waqtigiisu dhamamaday ee dalka Somalia, Xasan Sheekh Maxamud ayaa caawa ka hadlay go’aan kasoo baxay maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ kaasoo ay ku ogolaatay inay qaado dacwadda kiiska muranka biyaha ku saabsan ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Somalia. Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabadaas ay tahay mid ay ku farxayaan dhammaan shacabka Somaliyeed isagoo tilmaamay inuu yahay dadaal ...
Xildhibaano ku dhow labo boqol oo dhaleeceeyey ‘Faragalinta Itoobiya’
February 3, 2017	Comments 1,165 Views
Xildhibaano ka badan 170 Xildhibaan ayaa fiidnimada Khamiista shir isugu yimid kaas oo ay iyagu soo abaabuleen. Shirka Xildhibaanada ayaa ka dhacay Hotel Al-jaseera waxaana ay uga hadlayeen masiirka dalka, doorashada madaxweynaha iyo sida ay u beenin lahaayeen damaca itoobiya ee la sheegaayo in ay doorashada farogelin ku hayso. Xildhibaanadan oo u badnaa kuwo mucaraadsan Musharax Xasasn Sheekh Maxamuud ee ...
Soomaaliya oo ku guulaysatay wajiga hore ee Doodda Badda kala dhexeysa Kenya
February 3, 2017	Comments 805 Views
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa go’aan ka soo saartay dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladaha Kiiniya iyo Soomaaliya, waxayna aqbashay dalabkii Soomaaliya inay qaado dacwadaasi. Maxkamada oo galabta saacaddu markey ahayd 15:00 xiliga Soomaaliya u fariisatey ku dhawaaqidda go’aanka ayaa diiday dalabkii Kenya ee ahaa in aysan Maxkamaddu gelin dacwadda ee labada dal mar kale wada hadlaan. Qareemadda u doodaya ...
24 Musharax oo soo gudbistay araajidooda oo qaatay shahaadada Mushaxanimada
January 29, 2017	Comments 881 Views
Dr. C/raxmaan Ducaale Bayle, Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha, ayaa sheegay in ay diiwaangeliyeen 24 musharax, tan iyo 26-kii bishan. Diiwaangelinta musharaxiinta ayaa si rasmi ah u bilaabatay Khamiistii la soo dhaafay waxayna ku ekayd maanta oo ah Axad. Hoos ka eeg liiska kasoo baxay gudiga doorashada
Akhri: Xeerka Xadgudubyada Galmada ee Puntland
January 29, 2017	Comments 935 Views
Warbaahinta Dawladnimo waxay heshay nuqulka rasmiga ah ee Baarlamaanka Puntland uu ansixiyey sanadkii hore, sidoo kale madaxweynaha Puntland uu saxiixay isla markaana uu ku soo saaray faafinta rasmiga ah. <<<<<Guji Lingixaan: Xeerka Xadgudubyada Galmada Puntlad>>>>>